Tag Archive for "असुरक्षित" - याद गर्नुस,सामाजिक सञ्जालमा जीवनसाथीसँगको तस्वीर शेयर असुरक्षित !
याद गर्नुस,सामाजिक सञ्जालमा जीवनसाथीसँगको तस्वीर शेयर असुरक्षित !
एजेन्सी। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो जीवनसाथीसँगको तस्वीर सबैको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ गरेको छ । किनकी यस किसिमको तस्वीरले कुनै पललाई याद राख्नका लागि सहयोग गर्छ । यदि सामाजिक सञ्जालको तस्वीर यादको लागि मात्र सीमित रह्यो भने त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन तर यो भन्दा पनि निजी जीवनका सबै तस्वीर शेयर गर्ने मानिसहरुको लागि भने यो एक समस्या बन्न सक्छ । नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक नयाँ अनुसन्धानमा जी... थप पढ्नुहोस्
१६ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको २१ मंसिरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले काठमाडौंका १ सय ४१ मतदानस्थललाई निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रले संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । काठमाडौंका ३ सय २० मतदानस्थलमध्ये संवेदनशील मानिएका १ सय ४१ मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको निर्वाचन आयोग र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएका छन् । काठमाडौंका ३ सय २० मतदानस्थलमा ७ ... थप पढ्नुहोस्
१७ कात्तिक, काठमाडौं । दण्डहीनताका कारण दक्षिण एशियामै पत्रकार असुरक्षित हुँदै गएको पाइएको छ । मिडिया एक्सन नेपाल र आर्टिकल–१९ नामक संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘दण्डहीनता र पत्रकार सुरक्षा’सम्बन्धी कार्यक्रममा द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानवअधिकारकर्मीलगायतको छलफलमा दक्षिण एशिकयामै दण्डहीनताका कारण पत्रकार असुरक्षित बन्दै ग... थप पढ्नुहोस्